नेपाल स्वर्णको शतक - Prarambha Khabar
नेपाल स्वर्णको शतक
मङ्सिर १८, काठमाडौँ । नेपालले दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा स्वर्णमा शतक पदक जितेको छ । नेपालका लागि तेक्वान्दोका सक्षम कार्कीले तेह्रौं दक्षिण एसियाली खेलकुदको तेक्वान्दो विधा अन्तगर्त पुरुष ८७ किलो तौल समुहमा स्वर्ण पदक जित्नुभएको छ ।
जितसँगै नेपालले दक्षिण एसियाली खेलकुद इतिहासमा स्वर्ण पदकको संख्या एक सय पुर्याएको छ । सक्षमले तेह्रौं सागमा नेपाललाई २९ स्वर्ण दिलाउनुभयो । सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा सम्पन्न खेलमा सक्षमले पाकिस्तानका वकर अली शाहलाई पराजित गर्नुभयो । उहाँले स्वर्ण पदकको लागि भएको स्पर्धामा शाहलाई २७–९ ले हराउनुभयो । बाह्रौं सागसम्म ७१ स्वर्ण जितेको नेपालले तेह्रौं सागमा ५० स्वर्ण जित्ने लक्ष्य लिएको छ । स्वर्णमा शतक पदक प्राप्त गर्न भने नेपाललाई २९ पदकको कमी थियो । सक्षमले पाकिस्तानका शाहलाई हराएर ऐतिहासिक पदक आफ्नो नाममा गराउनुभयो ।
सन् १९८४ को पहिलो सागमा नेपालले चार स्वर्ण जितेको थियो । नेपालका लागि पहिलो स्वर्ण पदक भने प्रथम सागमा बक्सिङ्गतर्फ पुष्कर शाहीले दिलाउनुभएको थियो । उक्त सागमा नेपालले चार स्वर्ण प्राप्त गरेको थियो । पुरुष फुटबल टिमसँगै एथ्लेटिक्समा वैकुण्ठ मानन्धर र बक्सिङ्गमै दलबहादुर रानामगरले स्वर्ण पदक जित्नुभएको थियो । १९८५ मा सम्पन्न दोस्रो दक्षिण एसियाली खेलकुदमा एथ्लेटिक्सतर्फ वैकुण्ठ मानन्धरले जित्नुभएको स्वर्ण नै उक्त सागको लागि पहिलो र अन्तिम स्वर्ण पदक रहन गयो । १९८७ मा भारतको कलकत्तामा सम्पन्न तेस्रो सागमा नेपालका लागि दलबहादुर रानामगर र वैकुण्ठ मानन्धरले स्वर्ण पदक दिलाउनुभयो ।
पाकिस्तानको इस्लामावादमा सम्पन्न चौथो सागमा भने बक्सिङ्गतर्फ चित्र बहादुर गुरुङले पहिलो र एकमात्र स्वर्ण पदक जित्नुभयो । श्रीलङ्काको कोलम्बोमा सम्पन्न पाँचौं खेलकुदमा नेपालले टेबल टेनिस र शुटिङ्गमा गरी दुई स्वर्ण पदक जितेको थियो । शुटिङ्गमा अनिता श्रेष्ठ र टेनिसमा गिता क्षेत्री, सिर्जना शाह, पुजा थापा र निलम तुलाधर सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
एटविनद्वारा मानव बेचविखनसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक
गण्डकी मेडिकल कलेजबाट ९ विद्यार्थी पक्राउ
सभामुख चयनमा विमती राख्दै राष्ट्रपतिका सल्लाहकारद्वारा राजीनामा
सोनाम ल्होसारः उपत्यका बाहेक बागमती प्रदेशभर शुक्रबार सार्वजनिक बिदा
राष्ट्रियसभामा नेकपाका श्रेष्ठ, न्यौपाने र दाहाल विजयी
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको तयारी पुरा – निर्वाचन आयोग
सोनाम ल्होसारः उपत्यका बाहेक बागमती प्रदेशभर शुक्रबार…
मुलुकको स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्न…
एआइजी डा. आशा सिंह दर्ज्यानी चिन्हद्वारा सुशोभन
सम्पदाको महत्वबारे नीति निर्माता र नागरिकहरु सचेत हुनुपर्ने
© 2020 - Prarambha Khabar. All Rights Reserved.